Parks National Park - Obodo Cape Town
Ogige Nchịkwa Pilanesberg
Adreesị: Bojanala, North West, Pilanesberg National Park, South Africa;
Ekwentị: +27 14 555 1600;
South African Republic bụ ebe dị ịtụnanya na map ụwa. Ọ bụ ezie na akụ na ụba na ọtụtụ akụkụ nke ụwa na-eji nwayọ daa, ebe a, n'ụzọ dị iche - usoro mgbanwe ahụ na-eme. Ihe akaebe nke a bụ Ala National Park nke Mozambique - pụrụ iche n'ụdị ya na nke anọ kachasị na South Africa. Ná mmalite, ebe a dị ọtụtụ, ọtụtụ ọnọdụ ndụ dị mma na-adọta ndị si n'akụkụ nile nke mba ahụ ọtụtụ puku afọ gara aga.
Taa, Pilanesberg bụ ebe nchekwa kachasị elu, bụ nke dị njikere inweta ọtụtụ ndị nleta na afọ. Ezigbo ndị hụrụ n'anya na-echere ogige ụlọikwuu, ka ha wee nụchaa onwe ha ọbụna karịa na ụwa nke oge ochie. Maka ndị na-adịghị njikere ịkọrọ nkasi obi, na-enwe obi ụtọ na ọ dịghị ihe ọ bụla - na ụlọ ọrụ ndị dị ezigbo ọnụ ahịa ha bụ Kva-Maritane Lodge na Boughbung Lodge. Nke a pụrụ iche na ịma mma ya, ọnọdụ ebe obibi ya na ọgaranya n'ọdụ ụgbọ mmiri agaghị ahapụ ndị na-eme njem nleta ma ọ bụ ndị nkịtị.
Akụkọ banyere ogige ahụ
Ihe karịrị otu nde afọ gara aga, ebe a nwere nsogbu. Mgbawa ndị na-arụ ọrụ na-eme ka ụwa dị ala, na-emepụta ihe enyemaka dị egwu. N'ime otu n'ime ha - olulu nke nnukwu ugwu mgbawa na nke dị ugbu a na ọdụ ụgbọ oloko Pilanesberg. Ugwu ugwu ugwu gbara ya gburugburu, na-eke ọnọdụ ihu igwe pụrụ iche maka ọgba aghara nke ndụ ndụ. N'otu oge, ebo dị iche iche ghọtara nke a, na-edepụta ókèala ahụ ma na-ahọrọ ọrụ ugbo dị ka azụ azụ.
Na 1979, gọọmentị South Africa kpebiri ịtọhapụ mmadụ ma mepụta ogige ntụrụndụ n'ókèala a. Ọrụ ndị a na-enwetụbeghị ụdị ya na akụkọ ihe mere eme nke South Africa guzo n'ihu ha: ịkwatu ụlọ niile nke oge ịchị achị na ala mmadụ a ma dozie ọtụtụ anụ ọhịa dị ka ebe nchekwa ahụ nwere ike ịnata. Dika Igbe Noah, Pilanesberg weghaara umu mmadu di iche iche di iche iche di iche iche di iri abuo. Ekele maka ọrụ a, ọtụtụ nchịkọta anụ ọhịa agbakọtala ebe a, na-adọta ndị njem nleta na ndị ọkà mmụta sayensị site na ụwa ruo ọtụtụ iri afọ.
Ala Nchịkwa Pilanesberg taa
Ihe ndi mmadu ji mara ya bu ihe di mkpa site na nso nso nke ndi gbara egwu Sun City . Iji mee ka ndị njem na-ekele ekele karị, n'eziokwu, e kere paradaịs a nke mmadụ mere n'ụdị ebe nchekwa. A na-emegharị njem na Pilanesberg n'oge nile n'afọ. N'ebe a, ndị njem nleta pụrụ ịhụ n'onwe ha otú ndị nnọchianya nke "Big Five" a ma ama - buffalo, ọdụm, agụ owuru, rhinoceros na elephant na-ebi ndụ.
Ogige ahụ nwere ndị nlekọta ọkachamara na onye ị ga-enwe nchebe n'ebe nchekwa ahụ, ọbụna n'abalị. Achọpụtaghị onwe ha na abalị dị oke egwu, n'ihi ya, a machibidoro ha iwu ịhazi ogige.
Ọbụna n'oge ọ bụla, ndị ọbịa nke ogige ahụ nwere ike ịbanye n'ụdị safaris dịgasị iche iche, gụnyere ahụmahụ dị ịrịba ama na njem njem nlọ. Ekele maka ọnọdụ ya pụrụ iche na ihu igwe dị jụụ, mpaghara a bụ otu n'ime mmadụ ole na ole n'Africa ebe a pụrụ ime ka ụgbọ elu ndị dị otú a mee.
Ị nwere ike ịbanye na National Park nke Pilanesberg site na ụgbọ elu kwa ụbọchị site na Cape Town ma ọ bụ Johannesburg, ma ọ bụ site na Tswana na Johannesburg, site na Gauteng.
Ogige Mba Tankwa-Karoo
Ogige Nzuzo Ukwu
Na bat na ime ụlọ ịwụ ahụ
Robert Pattinson dị ka Onye Ọchịchị na Ịhụnanya: Ịkọ akụkọ site na agbapụ
Uwe oyi maka ụmụ agbọghọ
Bag Palio - nchịkọta ọhụrụ 2014
Onodu na okike - poses
Ọmụmụ ihe banyere ahụ mmadụ
Kedu ihe bara uru maka ginger?
Ike nke friji
Olee otú iji na-eri nri lilies na ọdịda?
Kukumba ude mmiri n'ụlọ
Ọnyà akpịrị na - agwọ ọrịa - ọgwụgwọ
Ụlọ ụlọ dị n'ime ụlọ ụmụaka maka nwa agbọghọ
Bonsai - nlekọta ụlọ
Asụsụ nne m maka ụmụaka
Onyinye nye Chief na February 23
Ụkwara nta - mgbaàmà, ihe ịrịba ama mbụ nke ụdị nile na ụdị ọrịa ọjọọ